Ataovy Krismasy bebe kokoa ny volanao amin'ireto tsipìka 12 ireto amin'ny endrika .PSD | Famoronana an-tserasera
Ao amin'ny volana Desambra isika ary hita izany. Ny haino aman-jery an-tserasera dia manomboka mandoka antsika amin'ny dokambarotra marobe momba ny colognes, sôkôla, fanomezana ... Ary ny katalaogna be dia be izay mampianatra antsika izay azontsika vidiana ity Navidad.
Ho an'ny tsy mahay mandaha-teny indrindra dia izao no fotoana ahatsiarovan'izy ireo fa mbola tsy nividy fanomezana izy ireo, ary mbola tsy manana akanjo hankalazana ny fetin'ny Taom-baovao ary tsy maintsy mividy fandaharam-potoana ho an'ny taona 2014. Raha mieritreritra ianao ny fanaovana ny fandaharam-potoananao manokana, na ny kalandrie, na ny carte postaly ... Na te handravaka ny tranokalanao na ny portfolio-nao indray mandeha ianao miaraka amin'ny antsipiriany izay miresaka ny Krismasy sy amin'ny fomba an-kolaka, tsy misy tsara noho ny tsipìka entinay anao anio! Eny, hahita rohy amin'ny endrika .PSD etsy ambany ianao. Araraoty tsara izy ireo!
Loop 12 amin'ny endrika .PSD
Fifamatorana 5 amin'ny PSD
Toa fanamarihana fohy ao anaty kahie izy ireo. Loko 5 samihafa: mena, maitso, volomboasary, manga sy mainty.
Kavina mainty mitsangana kely
Tena ilaina ny manasongadina zavatra amin'ny tranokalanao na ny volavolanao.
Zana-tsipika fotsy miaraka amin'ny habetsany
Mety ho an'ny lohateny na andian-teny lava.
Famatorana zorony 3
Green, karazana lasso telo apetraka amin'ny sisin'ny sary na varavarankely.
Fifamatorana azo tanterahina
Tsipìka azo trandrahana azo ampidirina ao anaty volavolanao krismasy.
Famatorana zorony mavo
Amin'ny PSD, anao manokana ny manolotra tolotra na fihenam-bidy.
Tady mena ho an'ireo daty manokana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » sary » Tsipika 12 amin'ny endrika .PSD ho an'ny volavolanao noely